Mayelana NATHI - Hebei Ewin Enterprise Co, Ltd.
HEBEI EWIN ENTERPRISE CO., LTDyasungulwa ngo-2003, Umnikazi: ube nesipiliyoni seminyaka engaphezu kwama-26 'ezikhwameni. Ukusebenza okuyinhloko esikhwameni sokuthenga, Izinto zokuphromotha nezipho. Le nkampani ibikhula ngokushesha futhi iqinisa ngokuqhubekayo, futhi manje isisebenzisana nabo bonke abahlinzeka ngamakhasimende abavela eYurophu nase-USA
Kulesi nezinye izinhlu zethu, zonke izinto zingenziwa ngokwezifiso ukufaka logo yenkampani yakho nesiqubulo. Siphinde futhi sinikeze izinto noma izinto ze-OEM kumklamo wakho. Siyakwazi ukugcina uhlelo lokuthumela kanye nokulawulwa kwekhwalithi, nentengo enhle futhi.
E-Ewin, sinikezela ngokubonisana kwamahhala, siyakwazi ukweluleka ngakho konke ukukhiqiza, ukuthunyelwa kanye nezici zesabelomali zamaphrojekthi akho. Sihlose ukukuhlinzeka noma ukukuthungatha abakhiqizi abafaneleka kakhulu ngemikhiqizo yekhwalithi ye-premium, isikhathi sokuguqulwa esifanele kanye namanani entengo amaningi ahambisana nezidingo zakho ngamunye.
Sihlala ngasohlangothini lwakho njalo ekuqinisekiseni ukuthi Uzokuthola Okulamula.